HayiIndex feed yakho kwiFeedBurner | Martech Zone
HayiIndex feed yakho kwiFeedBurner
NgoLwesithathu, Aprili 11, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kutshanje, bendisebenza kwindawo yam enye ukuphucula ukubekwa kweinjini yokukhangela. Utshintsho lukhokelele kutshintsho olwandayo ekubekweni kweinjini yokukhangela. Ndiza kuqhubeka nokwabelana nawe ngeziphumo njengoko ndisiya phambili. Olunye lotshintsho endilwenzileyo kutshanje Ukuqondisa kwakhona nasiphi na isithuthi ukusuka ku-http: //dknewmedia.com ukuya kwi-http: //martech.zone. Ndifuna i-www ibe yeyona ndawo yam iphambili apho amanqaku am achongwa khona. Andiqinisekanga ukuba loluphi uhlobo lwempembelelo oluza kuba nalo-siza kubona.
Ndifunde inqaku namhlanje ngo Ukuthengisa iPilgrim ekusebenziseni ukutya kwakho. Inomdla, khange ndiqonde ukuba ungade wohlwaywe ziinjini zokuphanda umxholo wakho kuba eyakho uShishino ukutya kulapha phandle! Inqaku liphawula ukuba ukubonelela nge-meta tag meta kwondlo lwakho kuya kuthintela iinjinjini zokukhangela kwiphepha lesalathiso.
Ngokuqinisekileyo, ndifumene useto ngaphakathi Isongezelelo evumela oku. Nantsi umfanekiso weskrini. Ukhetho lusilele ngaphandle ngenxa yoko kuya kufuneka ukuba uvule i-NoIndex kwaye ugcine useto lwakho.
I-Feedburner yinkonzo ebalaseleyo. Okukhona ndiyisebenzisa, kokukhona ndichukumiseka. Uya kufumana inani lezithuba kwindawo yam ngokubhekisele kwinkonzo yabo kwaye uyihlanganise kwindawo yakho. Ukuphunyezwa kwamanyathelo ngamanyathelo kukwi Ukubhloga i-E-metrics Isikhokelo ndibhalile.
Ukuthuka kweentyatyambo zegolide
Amabhaso okhetho lweBlogging
Epreli 11, 2007 ngo-6: 15 PM
Enkosi ngencam. Andizange ndiqaphele olo khetho phaya ezantsi.
Epreli 11, 2007 ngo-7: 18 PM
Ubheja, uTracy. Khange ndiyiqaphele kude kube namhlanje! Nditshilo ngaphambili ukuba i-Feedburner sisixhobo esimangalisayo, kunzima nje ukusifumana.
Epreli 12, 2007 ngo-8: 16 AM
Ingcebiso entle uDouglas!
Ndiqaphele olo khetho xa bendiqala ukumisela ukutya kwam kweFeedburner, kodwa ndicinge ukuba "ndiqinisekile… kutheni ungavumeli iinjini zokukhangela zikhombe ifidi yam, izokunceda kuphela, kunene!"
Kuyabonakala ukuba ndandingalunganga. 🙂
Epreli 12, 2007 ngo-8: 48 AM
Enkosi ngencam uDouglas! Yenziwe kwangoko 🙂
Epreli 12, 2007 ngo-10: 11 AM
Omnye enkosi ngencam, uDouglas. Ndiyiphumeze kwangoko. Kwakunomdla ukubona ukuba banebhokisi yokujonga ukuba bayenze ngokulandelayo, kodwa ayisebenzi.
Epreli 12, 2007 ngo-11: 33 AM
Enkosi ngencam. Sele ndiyikhethile, kodwa khange ndiqonde ukuba kutheni (khange ijonge).
Epreli 12, 2007 ngo-11: 48 AM
Hmmm, inqaku lalisele lisebenza kwisondlo sam. Ngaba kunokwenzeka ukuba bayenze isebenze ngokungagqibekanga?
Epreli 12, 2007 ngo-5: 43 PM
Kuhle kakhulu. Enkosi!
Epreli 12, 2007 ngo-9: 09 PM
Ukongeza kule robots.txt yokusebenzisa kwaye ungafaki ukutya kwakho kuyo!
Epreli 12, 2007 ngo-9: 11 PM
Licebo elihle elo. Yeyiphi indlela elula yokwenza oko?
Epreli 14, 2007 ngo-5: 54 PM
Ubekwa kakuhle kukhangelo lweTechnorati. Yindlela endiyifumene ngayo ibhlog yakho-kabini-ngengozi ngalo lonke ixesha.
Ndicinge ukuba izinto ebendizifuna ndizisiwe kuwe kabini ngeveki, kufanelekile ukuba ubhukishe
Epreli 14, 2007 ngo-6: 09 PM
Kulungile ukukuva, Thor. Ndiyathemba ukuba ndinako ukuhlangabezana nolindelo lwakho! Ndiza kujonga ibhlog yakho ngokunjalo! Ndizama ukuyenza loo nto nomntu wonke olungileyo ngokwaneleyo ukuba angabeka ingxelo.
Epreli 16, 2007 ngo-3: 02 AM
I-Feedburner ikwayindawo ye-PR 8 ke ezo zikhonkco ziyisiphu esimnandi. Nangona kunjalo, andiqinisekanga ukuba ucofa njani umkhondo wokudlala.
UJeroen de Miranda
Jan 20, 2010 ngo-3: 32 PM
ingcebiso enkulu, enkosi!
Việt ixesha elide
Agasti 20, 2011 kwi-6: 04 AM
bài này hay thật, cảm ơn ạ usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows